Soomaaliya: Covid-19 saddax bil ka dib Casharro iyo Caqabad | Somali Health
Home Faallooyin Soomaaliya: Covid-19 saddax bil ka dib Casharro iyo Caqabad
Ilaa hadda wuxuu xanuunku ku dhacay dad ka badan 7.8 Million kuwaasoo oo ku kala baahsan 213 waddan oo dunida laga soo sheegay, waxaa u geeriyooday dad kor u dhaafaya 431,192 Kun halka ey ka bogsadeen dad kor u dhaafaya 3.5 Million.
Soomaaliya bukaankii ugu horreeyay ee qaba cudurka COVID19 16kii March 2020. Haddaba, mudo 90 maalmood kaddib maanta xanuunku wuxuu ku dhacay 2,642 qof, oo 622 qofood oo ka mid ahi ay ka bogsatay, 88 qofna u geeriyootay. Xanuunka wuxuu ku faafay dhammaan gobollada dalka Soomaaliyeed.
Soomaaliya iyo u diyaarsanaanta ka jawaabidda COVID-19
Kadib markii uu cudurka COVID-19 soo gaaray dalalka dariska la ah Soomaaliya, dawladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin kahortag ah kuwaasoo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka bulshada gudahaheeda, tallaabooyinkaas waxaa ka mid ah; in dowladdu xirtay xuduudaha dalka, in la hakiyay waxbarashadii dugsiyada iyo kuwii jaamacadaha, in la mamanuucay kulammada dadka badan iskugu imaanayeen, in la joojiyey Khatkii ( Qat/jaadkii) waddanka la keeni jiray iyo in la soo rogay bandow habeenkii ka dhaqangalay magaalooyinka qaar laakiin sidii la qorsheeyey aa u dhaqan gelin.
Dhinaca kale, dowladu waxaa magacawday Guddi heer qaran ah oo ka shaqeynaya arimaha COVID-19, oo ay ka mid yihiin Wasiirro, Ganacsato, Culumaa’udiin, Dhakhaatiir iyo Bulshada Rayidka ah. Sidaas si la mid ah, Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka bulsahada Soomaaliya waxey diyaarisay labo xarun oo loogu talo galay in lagu karantiilo dadka looga shakiyo xanuunka, laguna daaweeyo dadka uu xanuunku haleelo xaalad qatar ahna gaara.
Sidoo kale, Ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed wuxuu magacaabay gudi dhakhaatiir ah oo ka shaqeynayay la talinta wasaaradda caafimadka, wacyigalinta iyo tababarada xirfadlayaasha caafimada ee arimaha COVID-19.
Cudurka inuu saameeyay ama ku dhacay bilawgiisi saraakiil caafimaad oo ka tirsanaa wasaaradda caafimadka iyo howlwadeenno caafimaad ee ka shaqeynayay howlaha COVID-19.
Waxaa la awoodi waayay oo adkaatay in la raadraaco oo lasoo helo dadka xiriir dhow la yeeshay bukaanka laga helo cudurka.
Awooda baaritaanka oo bilawgii aad u hooseeyay dalka dibeddiisana loo diri jiray si loo baaro muunada lasoo qaaday, inkasto waqtiyadii danbe dalka la keenay qalabka lagu baaro xanuunka laakiin waxa u ahaa mid kooban, sidoo kale waxaa yarayd awoodda baaritaan baahsan lagu samayn karo.
In isbitaallada guud ee dowladda hoos yimaada tayadooda iyo agabkooda si aad ah kor loogu qaado, loona sameeyo oxygen tallaalan, sidoo kale, in si joogta ah loola socdo howlaha caafimaad ee bulshada u qabanayaan in ee gaarsiisantahay heerkii loogu talo galay, wixii taageero ahna markaaba loo fidiyo. Sidaas si lamid ah isbitaalada gobolada gaar ahaan kuwa magaalada madaxyada ku yaala ugu yaraan loo helo oxygen tallaalan.
In la sii diyaariyo kaadiriin caafimaad oo taqsusu / xirfado kala duwan leh eyna ka mid noqdaan shaqaalaha aan joogtada aheyn ee wasaaradda caafimaadka loona dhammeystiro wax walbo oo ay u baahanyihiin sida tababbarro joogta ah si loo hawlgeliyo haddii ee dhacdo baahi caafimad oo deg-deg lama filaana ah loona baahdo shaqaale dheeri ah.
Dr. Ibraahim Guled, Xoghaya Guud ee Ururka Dhakhaatiirta Soomaaliyeed ahna dhakhtar ku taqasusay cudarada Caruurta. Kala xiriir: Drguledyare88@gmail.com
Ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed
Previous articleHey’adda caafimaadka Adduunka ku talisay in Afgashiga loo xirto goobaha bulsahda
Next articleDaaweynta Dexamethasone ee cudurka COVID19